Spain Archive - Gool FM - page 2	twitter
RASMI: Waqtiga la ciyaari doono El-Clasico oo la shaaciyay
(Madrid) 20 Maarso 2017 Xiriirka kubadda cagta Spain ayaa go’aamiyay waqtiga rasmiga ah ee la ciyaari doono kulanka adag ee El-Clasico.
Waxaana la go’aamiyay in kulankaas la ciyaari doono 23 April maalin Axad ah, saacada barriga afrikana ay tahay 9:45 PM.
Ciyaarta ayaana lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu, labada kooxood ayaana haatan isku jira 2-dhibic, inkasta oo Real uu kulan baaqi u yahay.
Waxaa xusid mudan in kulankii lugta hore ee El-Clasico xiliciyaareed kan uu ku soo idlaaday 1-1, 
LA LIGA: Barcelona oo guul muhiim ah ka gaartay Valencia+SAWIRRO
(Catalonia) 20 Mar 2017. Barcelona waxa ay guul ahmiyad weyn u leh ka gaartay Valencia kulankii goor dhaweyd ku soo dhamaaday Camp Nou.
Ciyaartan oo ay soo dhaweysay Valencia ayey ogaayeen wiilasha Luis Enrique in aysan xamili karin wax guul ka yar maadama ay Real Madrid xalay badisay.
Hase ahaatee, waxaa gool uga naxsaday Eliaquim Mangala daqiiqadii 29-aad kahor inta uusan lix daqiiqo kaddib bar bareen Luis Suarez.
Lionel Messi ayaa gool ku laad u dhaliyey daqiiqadii 45aad balse isla daqiiqadaas waxaa bar bareeyey Munir 
Bale oo qaati ka taagan BIDAARTA ku sii siqeysa isla markaana damacsan qorshe cusub…+SAWIRRO
(Madrid) 19 Mar 2017. Xiddiga Real Madrid Gareth Bale ayaa la warinayaa inuu qaati ka taagan yahay Bidaarta ku sii baaheysa isla markaana uu hadba timaha dhaa-dheer ku daboolo si uu u qariyo.
Bale ayaa Bidaarta ku sii siqeysa ku daboola timaha dhaa-dheer uu deystay, laakiin iminka waxaa la sheegayaa inuu qorsheynayo inuu timo cusub abuurto sidii Antonio Conte iyo Rooney oo kale.
Laacibka reer Wales ayaa si wayn baraha bulshada gaar ahaan Twitter-ka looga jafay bidaarta uu Tinta ku qarinayo intii 
Cristiano Ronaldo oo furka tuurtay kaddib markii la badelay kulankii shalay ee Real Madrid…(Muxuu yiri?)
(Madrid) 19 Mar 2017. Cristiono Ronaldo ayaa war kulul yiri kaddib markii la badley kulankii shalay ay Real Madrid 2-1 uga adkaatay kooxda Athletic Club.
Tababare Zidane ayaa go’aansaday inuu nasiyo xiddiga reer Portugal isagoo daqiiqadii 79-aad ku badelay Isco.
Kaamirooyinka Gol TV ayaa waxay soo qabteen Ronaldo oo leh:
“Maxay tahay sababta aniga la ii badelay? Wuxuuna intaa raaciyay hadal kulul oo ahaa F*** off.”.
Ma ahan markii ugu horreysay uu Ronaldo ka caroodo badel ku dhacay, inkastoo ay is gacan qaadeen isaga 